सबै मिलेपछि विकास सम्भव छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सबै मिलेपछि विकास सम्भव छ
सबै मिलेपछि विकास सम्भव छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता December 26, 2018	0 139 Views
देउखुरी विकास अभियान समितिका संयो जक तथा लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष
देउखुरी क्षे त्र पूर्वाधार विकासमा पछि परेको छ । प्रदे श ५ को के न्द्रबिन्दुमा दाङको देउखुरी उपत्यका पर्छ । राजमार्गले छो ए पनि यहा“को विकास सो चे जसरी अघि बढ्न सकेको छैन । बेला–बेलामा दे उखुरीको समग्र विकासको बहस चलिरहन्छ । अहिले फे रि दे उखुरीको समग्र विकासको बहस शुरु भएको छ । लमही नगर विकास समितिको अगुवाइमा जनप्रतिनिधिको माझमा छलफल चलिसके को छ । दे उखुरीको विकास गर्न प्राधिकरण नै आवश्यकता पर्ने र त्यसको गठन गर्ने गरी बहस केन्द्रित भएको छ । दे उखुरीको समग्र विकासको अवधारणा किन अघि सारियो भन्ने सवालमा रहे र दे उखुरी विकास अभियानका संयो जक तथा लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम सुवे दीसग युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरेले गर्नु भएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
दे उखुरी विकास प्राधिकरणको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । यसको खास कारण के हो ?
दे उखुरी पहिले दे खि नै थारु समुदायको बसो वास भएको ठाउ । थारु समुदाय धर्तीपुत्र हुन् । यहा खे तीपाती गनेर् थलो हो  । खास पूर्वाधारको विकास नभएको अवस् था छ । दाङ उपत्यकालगायत अन्य ठाको विकासको तुलनामा दे उखुरी उपत्यका पछि परेको अवस्था छ । देउखुरीको समग्र विकास गरौ ं भन्ने हे तुले यहाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदे शसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, संघसंस् थाका अगुवाहरु सबै एकमत भएर हामीले साझा एजे ण्डाको रुपमा यसलाई अघि बढाऔ ं भन्ने किसिमको सो च राखे र हामी दे उखुरी विकास प्राधिकरण गठन गर्न अगाडि बढे का हौ ं ।
देउखुरी विकास प्राधिकरण गठनको पहल अगाडि बढे को कुरा बताउनुभयो  । के –के क्रियाकलापहरु भएका छन् यो बीचमा ?
पहिलो चरणमा दे उखुरीको समग्र विकाससग जो डे र छलफल ग¥यौ ं । त्यो छलफलले एउटा समिति गठन ग¥यो  । त्यसपछि दे उखुरीको समग्र विकाससग जो डिएका यो जनाहरुको विषयमा तयार पारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो  । त्यस कार्यपत्रको आधारमा प्रारम्भिक छलफल भयो  । कार्यपत्रको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय यो जना आयो गका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञ डा. गो विन्द पो ख्रे ललाई बो लाएर सुझावहरु माग ग¥यौ ं । अब हामीले त्यसलाई प्रत्ये क स् थानीय तहमा गएर त्यहाको आवश्यकता के हो ? कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा छलफल गछौर् ं । सवै को एउटा साझा बै ठक बसे र फे रि कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ र हामी यसै गरी सबै को सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्छौ ं । सबै को सल्लाह सुझावको आधारमा दे उखुरी विकासको गुरुयो जना निर्माण गछौर् ं ।
देउखुरी विकासको गुरुयो जना बनाउने कुरा त बताउनुभयो , गुरुयो जना बने पछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिने स्रो त चाहि“ कसरी जुट्छ ?
कार्यान्वयनको पाटो लाई बलियो बनाउनुपर्छ र बनाउने यो जनामा छौ ं । स् थानीय सरकार नै पहिलो आधार हो  । प्रतिनिधि र प्रदे श सांसदज्यूहरुसगको बजे ट समे त दे उखुरी विकास गुरुयो जनाअन्तर्गत तयार भएका यो जनामा समावे श गरे र ।
अर्काे कुरा ने पाल सरकारबाट छुट्टै बजे ट दे उखुरी विकास प्राधिकरणको नाममा बिनियो जन गर्न लगाएर स्रो तको सुनिश्चितता गर्ने यो जनामा छौ ं ।
प्राधिकरण गठन गर्ने ने पाल सरकारले हो  । तपाइहरु दे उखुरी विकास प्राधिकरण गठनको लागि पहल गरिरहनुभएको छ । सरकारलाई मनाउन सक्नुहुन्छ ?
त्यसमा सुन्नको लागि त सरो कारवाला सबै संघ संस् थाहरु, जनप्रतिनिधिहरु र यहाका सबै जनताको भावनालाई बुझे र उहा“हरुले निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ र हामीले पनि संस्थाको रुपमा दर्ता गर्दै विधिवत रुपमै अगाडि बढ्ने यो जना छ ।
दे उखुरीको समग्र विकासको बहस चलाउनुपर्छ भन्ने धारणा कसरी आयो ?
हल गरे पछि हरे क विकास निर्माणका कामहरु हुन सक्छन् । अल्पकालीनदे खि दीर्घकालीन यो जना बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । सबै मिलिसके पछि विकास असम्भव छै न । त्यसै हिसाबले चर्चा पनि चल्यो  । र, सवै साथीहरुले साथ दिनुभयो  । त्यसरी हामीले यो प्राधिकरणलाई अगाडि सा¥यौ ं । दाङको दे उखुरी उपत्यका पाच नम्बर प्रदे शको राजधानीको लागि उपयुक्त हो भन्ने किसिमको कुरा राख्ने क्रममा मै ले सबै पार्टीका साथीहरुलाई बो लाएर एउटा मिटिङ गर्न खो जें  । त्यसपछि सबै पत्रकारहरुलाई बो लाएर छलफल गरियो  । त्यति गर्दाखेरी हाम्रो क्षे त्रीय प्रशासक आउनुभयो  ।
क्षे त्रीय प्रशासक आएपछि मै ले नगर विकास समितिका भवनहरु दे खाए । भूजविमा रहे को कार्यालयहरुमा लगे  । ती दे खाउने क्रममा पनि सबै ठीकै छ । यहा पूर्वाधार अलि कम छ भन्ने किसिमको कुरा क्षे त्रीय प्रशासकले भन्नुभयो  । अझ त्यसमा के खड्क्या थियो भने एउटा सभाहल नै नभएको अवस्था ।
एक हजार मानिस अटाउने सभाहल छैन भन्ने किसिमको कुरा राख्दाखे री मै ले फिलिम हलतिरको कुरा गरे ं । नगर विकास समितिबाटै एक विगाह जग्गामा बाउन्ड्री घे रे र एक हजार मान्छे अटाउने सभाहल बनाउने त्यो प्लान पनि मै ले जो डें  । मलाई के खड्क्यो भने पछि वास्तवमा मान्छे को एकताविना विकास सम्भव छै न । विकास गर्नलाई यो वा त्यो पार्टी सम्झे र हुदै न ।
आफ्नो ठाउको विकास गर्न सबै लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको मलाई त्यो भावना जाग्यो  । त्यसपछि म यो पार्टी, त्यो पार्टी नभने र विकासप्रे मी साथी छन् भने उहाहरुलाई सधै मै ले वे लकम गर्छु । सधै भरि साथ दिन्छु । मे रो जीवन शुरुदे खि नै सामाजिक क्षे त्रमा समर्पित छ । म शिक्षक भएर काम गर्दा पनि म भएको ठाउमा पनि धे रै काम गरे को छु । र, अहिले पनि म मे रो आफ्नो घरको कामतिर पटक्कै छै न । बिहान उठेदे खि सा“झ बास बस् ने बे लासम्म म सामाजिक काममै लागिरहे को छु ।
अब दे उखुरीलाई कसरी अघि बढाउने ?
यहाका नागरिकहरु कृषिमा बढी आश्रित हुनुहुन्छ । विभिन्न जातजातिमा आधारित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहा“हरु सबै लाई एउटै मालामा गास्नु पर्छ । उहाहरुका समस्याहरु के छन्, के –के गर्दा उहाहरुको विकास हुन सक्छ । पूर्वाधार विकास गरे र मात्रै भएन हामीले चाहि उहाहरुको आर्थिक विकास गर्नु प¥यो  । सामाजिक विकास गर्नुप¥यो  । शै क्षिक उन्नति हुनुप¥यो  । सबै घरमा शिक्षित र स् वाबलम्बी मान्छे हरु हुनुप¥यो  । यहा“का नागरिकहरुको आर्थिक उन्नति गरिसके पछि यो ठाउ जुरुक्क उठ्न सक्छ । त्यसको लागि प्लानविना ह“ुदै न । प्लान गरे न भने जनता सधै भरि गरिब हुन्छन् । र, नेता भने धनी भइरहन्छन् । जनतालाई समृद्ध बनाउन उनीहरुको आयआर्जन बृद्धि हुनुपर्छ । आयआर्जनका लागि व्यावसायिक यो जनाहरु बनाउनुपर्छ । कृषि, पशु पालनको व्यावसायिकीकरणबाट जनताको आर्थिक रुपमा जीवनस् तर सुधार गर्न सकिन्छ । यही विषयलाई फो कस गरे र कार्यक्रम गर्नुपर्छ । हाम्रो पहल यसै मा के न्द्रित छ । यसका साथै सरकारले नागरिकहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराउनुपर्छ । सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखे र सहयो ग ग¥यो भने धे रै गरिब नागरिकको जीवनस् तर माथि उठ्छ ।
अन्त्यमा के ही छुटे का कुराहरु छन् कि ?
देउखुरी विकास प्राधिकरण गठनको पहल अघि बढाएका छौ ं । यो पहललाई सार्थक बनाउन म सबै सग अनुरो ध गर्छु । राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदे शसभा सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रमुख जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण नागरिकको पहलकदमीबाट मात्रै सम्भव भएकाले यो अभियानलाई सहयो ग गर्न अनुरो ध गर्छु ।
Previous: भैंसी पालनबाट वार्षिक ४५ लाख आम्दानीानी
Next: छाउगोठमा न्यानो बनाउँदा ज्यान गुमाउँदै